နောင်တရခြင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားသခင် ဆွစ်ဇာလန်အသင်းတော်
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > နောင်တ
နောင်တရခြင်း (“နောင်တ” ဟုလည်းပြန်ဆိုသည်) သည် ကြင်နာတတ်သောဘုရားသခင်အပေါ်ထားရှိသော စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှယူဆောင်လာပြီး ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ အမြစ်တွယ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်တရခြင်းတွင် ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောအသက်တာသစ်တစ်ခုနှင့်အတူ လူတစ်ဦး၏အပြစ်ကိုသိလာခြင်းနှင့် အတူပါ၀င်ခြင်းပါဝင်သည်။ (တမန်တော်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ 2,38; ရောမ 2,4; 10,17; ရောမ ၁2,2)
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်လူငယ်တစ် ဦး ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုထပ်ခါတလဲလဲအပြစ်များကြောင့်သူ့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သည်ကိုအလွန်ကြောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ ငါနောင်တရမယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆက်လုပ်ခဲ့တယ်” ဟုသူကပြောသည်။ “ ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါစိုးရိမ်တာကြောင့်ငါတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာတောင်မှငါမသိဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်နောင်တရသော်လည်းမည်မျှပင်ရိုးရှင်းပါစေ၊
ဘုရားသခင်နောင်တရကြောင်းပြောသောအခါ the ၀ ံဂေလိတရားသည်အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ယေဘူယျအဘိဓာန်ကို အသုံးပြု၍ ဤအသုံးအနှုန်းကို နားလည်ပြီး နောင်တရခြင်း (သို့မဟုတ် နောင်တရ) ဟူသော စကားလုံးကို လှည့်ကြည့်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမဆုံး အမှားလုပ်မိပါသည်။ အဘိဓာန်ထုတ်ဝေသည့်အချိန်နှင့်အညီ စကားလုံးတစ်လုံးချင်း နားလည်ရမည်ဟု အရိပ်အမြွက်ပင် ရရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် 2nd အဘိဓာန်1. Century က စာရေးဆရာ ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့ ခက်ပါတယ်။ B. သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2000 က ၎င်းတို့နားလည်သော အာရမိတ်ဘာသာစကားဖြင့် ယခင်ကပြောခဲ့သော ဂရိဘာသာဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။
Webster ၏နဝမအကြိမ်မြောက်ကောလိပ်အဘိဓာန်ကနောင်တဟူသောစကားလုံးကိုရှင်းပြသည် - ၁) အပြစ်မှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဘ ၀ တိုးတက်မှုအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံခြင်း၊ ၂ က) နောင်တရခြင်း၊ ၂ ခ) သဘောထားပြောင်းလဲခြင်း။ Brockhaus စွယ်စုံကျမ်းကနောင်တရခြင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
Webster ၏ပထမဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်နောင်တယူပြီးယုံကြည်သောအားဖြင့်သခင်ယေရှုဆိုလိုသည်မှာဘာသာရေးလူအများစုယုံကြည်သောအရာသည်အတိအကျဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌အပြစ်များကိုရပ်တန့်ပြီးမိမိတို့၏လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်လူသာလျှင်ဟုယေရှုဆိုလိုသည်ဟုသူတို့ထင်ကြသည်။ တကယ်တော့ဒါကယေရှုမပြောခဲ့တာတွေပဲ။
နောင်တရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမှားပြုမိသောအမှားသည်အပြစ်ကိုရပ်တန့်ရန်အချိန်တန်ပြီဟုထင်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ အကယ်၍ မင်းတကယ်နောင်တရခဲ့ရင်မင်းဒါကိုနောက်တဖန်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး” ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသောဝိညာဉ်ရေးရာအကြံပေးများထံမှနာကျင်ခံစားနေရသောစိတ်ဝိညာဉ်များသည်အမြဲတစေရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်တရခြင်းဟူသည် "နောက်ပြန်လှည့ ်၍ အခြားလမ်းဖြင့်သွားရန်" ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောထားသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ထိုအသက်တာ၌အပြစ်တရားမှရှောင်ကျဉ်။ ဘုရားသခင့်တရားတော်ကိုနာခံသောအသက်တာသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုရှင်းလင်းပြသထားသည်။
ဤအရာကိုအခိုင်အမာစိတ်စွဲမှတ်ထားခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်ရှိသောခရစ်ယာန်များသည်သူတို့၏လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီတော့တချို့လမ်းကြောင်းတွေကသူတို့ရဲ့ဘုရားဖူးသွားတဲ့အခါပြောင်းလဲသွားတယ်၊ တချို့ကစူပါကော်နဲ့ကပ်နေပုံရတယ်။ ပြောင်းလဲနေသောလမ်းကြောင်းများ၌ပင်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခြင်း၏မုန်းတီးမှုအရည်အသွေးရှိသည်။
ဘုရားသခင်သည်ထိုကဲ့သို့သောမယိမ်းယိုင်သောနာခံမှုကိုသာမန်အားဖြင့်ကျေနပ်အားရပါသလား။ တရားဟောဆရာက "မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး" the ၀ ံဂေလိတရားကိုပျက်ပြားစေသောဆိုးရွားသောဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှု၊ ကျရှုံးမှုနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်မှုသံသရာလှောင်အိမ်၏ဘီးများကဲ့သို့နောက်တစ်လှည့်လည်သွားသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏မြင့်မားသောစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်စိတ်ပျက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျသောအခါနောက်ထပ်တရားဟောချက်တစ်ခုကိုကြားရပြီး၊ “ စစ်မှန်သောနောင်တတရား” နှင့်“ နက်ရှိုင်းသောနောင်တတရား” အကြောင်းဆောင်းပါးအသစ်ကိုဖတ်ရှုပြီး၎င်းသည်နောင်တတရားသည်လုံးဝအပြစ်နှင့်လုံးဝကင်းဝေးကြောင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နောင်တရခြင်းသည်“ နက်နဲ” မဟုတ်၊ “ လေးနက်သော” သို့မဟုတ်“ ရိုးသားမှု” အလုံအလောက်မရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်နောင်တမရခဲ့ဟုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့နောင်တမရဘူးဆိုရင်ငါတို့မှာလည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိနိုင်တော့ဘူး၊ ဒါကငါတို့မှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကယ်မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဆိုလိုတာကငါတို့လည်းကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုတာပါပဲ။
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးဘုရားသခင်နှစ်သက်လက်ခံအောင်လုပ်ခဲ့တာလို့လူတွေကတကယ်ယုံကြည်ကြတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုပြောဖို့မလိုပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးလာတယ်။ ဘုရားသခင်ထံနောင်တယူခြင်းသည်အသစ်သောတိုးတက်လာသောမိမိကိုယ်ကိုဘာမျှမလုပ်ပါ။
“နောင်တရ [နောင်တရ] ၍ ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်လော့” ဟု မာကု၌ ယေရှုရှင်းပြသည်။ 1,15. နောင်တနှင့်ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအသစ်၏အစပြုခြင်းအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်တာ ငါတို့မှန်တယ်ဆိုတော့ မလုပ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် ထိုအချိန်တွင် အကြေးခွံများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မှောင်မိုက်နေသောမျက်လုံးများမှကျလာပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်၏သားတော်များ၏လွတ်လပ်ခြင်း၏ဘုန်းအသရေအလင်းကို ယေရှု၌မြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူများကိုအပြစ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ပြုရမည့်အရာများသည်ဘုရားသခင့်သားတော်အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီအမှန်တရားကငါတို့ဆီကဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကမျက်စိမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်မွေ့လို့မရဘူး။
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှာရမယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ငါတို့ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့အချိန်အားလုံးဟာငါတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ဘ ၀ ထောင့်မှာထွန်ကြောင်းကိုထွန်တုံးထွန်ဖို့ထွန်ယက်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအားလုံးသည်ရှင်သန်နေစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကိုလုံခြုံရန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့နဲ့လေးစားခံရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ခုရဲ့မျှတမှုကိုမျှတစွာအသုံးမပြုဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သတင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများ၊ ငါတို့ဘ ၀ မှတန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှုံးသမားများကိုမဟုတ်ဘဲအောင်မြင်သူများအနက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
သို့သော်အသက်ရှင်ခဲ့ဖူးသူမည်သူမဆိုအတွက်မူ၎င်းသည်ရှုံးနိမ့်သောတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုများ၊ အစီအစဉ်များနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်ပြာမှကောင်းကင်သို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကြွင်းအကျန်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏အကြွင်းအကျန်များကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည့်ကပ်ဘေးများနှင့်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးများ၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မတားဆီးနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်၌သေကြပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျောက်ဆုံးသူများ၊ မျက်မမြင်ရှုံးနိမ့်သူများနှင့်ပြည့်သောကမ္ဘာကြီးတွင်ပျောက်ဆုံးနေသောမျက်မမြင်ရှုံးသူများမှသာထွက်ပေါက်တစ်ခုတည်းသောလူ၏လက်ကိုကိုင်ထားရန်အသိမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရှုံးနိမ့်စေတယ်။ သူ၏ထမြောက်ခြင်း၌ပါဝင်နိုင်ရန်သူ၏သေခြင်း၌သူနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်သူနှင့်အောင်မြင်သူဖြစ်လာနိုင်သည်။
တစ်နည်းပြောရရင်ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုသတင်းကောင်းပေးတယ်။ သတင်းကောင်းမှာသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ရွေးနှုတ်တော်မူသည်ကို၎င်း၊ သန့်ရှင်းစေ။ ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုဝတ်စေ။ ၊ ထာဝရပွဲခံရာပွဲ၌ငါတို့ကိုခန့်ထား၏။ ပြီးတော့ဒီgဝံဂေလိတရားစကားတော်အားဖြင့်သူကဒါကိုယုံဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဤအရာများကိုမြင်။ ယုံကြည်နိုင်လျှင်နောင်တရပါသည်။ နောင်တရချင်တယ်ဆိုရင်“ ဟုတ်တယ်! ဟုတ်ကဲ့! ဟုတ်ကဲ့! ငါထင်တယ် မင်းရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါယုံတယ် ငါဘ ၀ မှာပြေးနေတဲ့ဟမ်းစ်တာရဲ့ဘဝကိုဒီစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီးဘဝလို့ထင်မှတ်မိတဲ့ဒီသေခြင်းတရားကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ။ မင်းအနားယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊
နောင်တယူခြင်းသည်သင်ထင်သောလမ်းကိုပြောင်းလဲနေသည်။ သင့်ကိုစကြာ ၀ centerာ၏ဗဟိုအဖြစ်ရှုမြင်ရန်သင်၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲစေသောကြောင့်ယခုသင်သည်ဘုရားသခင်ကိုစကြာ ၀ ofာ၏ဗဟိုအဖြစ်မြင်ပြီးသင်၏အသက်တာကိုကိုယ်တော်၏ကရုဏာတော်၌အပ်နှံလိုက်သည်။ သူ့ကိုလက်အောက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏သရဖူကိုစကြာ ၀ ofာ၏မှန်ကန်သောအုပ်စိုးရှင်၏ခြေရင်း၌ချထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ဆုံးဖြတ်မည့်အရေးအကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
နောင်တသည်ကိုယ်ကျင့်တရားမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအမူအကျင့်ကောင်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါဟာပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
နောင်တရခြင်းဆိုသည်မှာသင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏စိတ်ဖောက်ပြန်မှု၊ မိတ်ဆွေများ၊ သင်၏တိုင်းပြည်၊ အစိုးရ၊ သေနတ်များ၊ ငွေ၊ မင်းအာဏာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ သင်၏ကား၊ အိမ်၊ သင်၏အသားအရောင်၊ လိင်၊ လိင်၊ သင်၏အောင်မြင်မှု၊ အသွင်အပြင်၊ အဝတ်အစား၊ ဘွဲ့၊ ဘွဲ့၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ခင်ပွန်းသည်၊ ကြွက်သားများ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ IQ၊ သင်၏ဝဲ၊ အောင်မြင်မှု၊ သင်၏ချစ်ခင်မှု၊ သင်၏သနားကြင်နာမှု၊ သင်၏စည်းကမ်း၊ သင်၏သန့်ရှင်းမှု၊ ရိုးသားမှု၊ သင်၏နာခံမှု၊ သင်၏ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှု၊
နောင်တရခြင်းဟူသည်သင်သည်“ အရာအားလုံးကိုကဒ်ပြားတစ်ခုပေါ်တွင်” - ဘုရားသခင်၏“ ကဒ်” ပေါ်တွင်ဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုတာကသူ့အနားကိုယူခြင်း၊ သူယုံကြည်ဖို့ပြောတာ၊ သူနှင့်အတူအင်အားစုများပူးပေါင်းရန်, သူ့ကိုသစ္စာစောင့်သိရန်။
နောင်တရခြင်းဟူသည်ကောင်းကျိုးအတွက်ကတိတော်မဟုတ်ပါ။ အပြစ်တရားကိုလူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ မှဖယ်ရှားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကရုဏာရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဟူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မကောင်းသောနှလုံးသားကိုစနစ်တကျဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်ဟုသူကဆိုသူမှာယုံကြည်သူဖြစ်သည် - ဖန်ဆင်းရှင်၊ ကယ်တင်ရှင်၊ ရွေးနုတ်ရှင်၊ ဆရာ၊ သခင်နှင့်သန့်ရှင်းသူ။ ပြီးတော့သေခြင်းကိုဆိုလိုတာကဖြောင့်မတ်ခြင်း၊
ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည်မဟုတ်၊ ငါတို့ကိုချစ်သော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုအကြောင်း ပြောကြသည် (1. ဂျိုဟန် 4,10) သူသည် သင်အပါအဝင် အရာအားလုံး၏ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး သင်မည်သူဖြစ်သည်၊ ခရစ်တော်၌ရှိသော သူ၏ချစ်လှစွာသောကလေးသည် သင့်အား ချစ်ကြောင်းကို သင့်အပေါ်တွင် အရိပ်အမြွက်ပြနေပါသည်။ သင်သည် ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် မည်သည့်အရည်အသွေးမျိုးရှိသော်လည်း သင်သည် ခရစ်တော်၌ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရုတ်တရက် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ။ တစ်လောကလုံး ရုတ်တရက် လင်းခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ မင်းရဲ့ ကျရှုံးမှုတွေအားလုံးက အရေးမကြီးတော့ဘူး။ ခရစ်တော်၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင် အရာအားလုံးကို မှန်ကန်စေခဲ့သည်။ သင်၏ ထာဝရအနာဂတ်သည် အာမခံချက်ရှိပြီး၊ ကောင်းကင် သို့မဟုတ် မြေကြီးပေါ်ရှိ မည်သည့်အရာကမျှ သင့်အား ခရစ်တော်ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် သင့်ရွှင်လန်းမှုကို ပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်သည် (ရောမ၊ 8,1.၃၈-၃၉)။ မင်းသူ့ကိုယုံတယ်၊ သူ့ကိုယုံတယ်၊ မင်းအသက်ကို သူ့လက်ထဲထည့်တယ်။ မည်​သူ​မျှ​ပြော​သည်​ဖြစ်​စေ၊ မည်​သည့်​အ​ရာ​ဖြစ်​စေ၊ မည်​သည့်​အ​ရာ​သို့​လာ​ပါ​စေ။
ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကို ကျင့်သုံးခြင်း၌ ရက်ရောစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ကျရှုံးမှု၌ပင် ကြင်နာနိုင်သည် - သင့်တွင် ဆုံးရှုံးစရာဘာမျှမရှိပါ။ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် ခရစ်တော်၌ အရာရာကို လုံး၀ အောင်နိုင်ပြီ။ (ဧဖက် 4,32-5,1စာ-၂)။ သင့်အတွက် အရေးကြီးသောအရာမှာ သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ဖြစ်သည် (ဂလာတိ) 6,15).
နောင်တသည် ဟောင်းနွမ်းနေသော၊ ယောက်ျားကောင်း သို့မဟုတ် မိန်းကလေးကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရန် ကတိပြုရုံမျှသာ မဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ ပုံတူရုပ်ထုကြီးတွေအားလုံးမှာ မင်းကိုယ်တိုင်သေပြီး ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးတွေကို ချောမွေ့စေမယ့် မင်းရဲ့အားနည်းတဲ့လက်ကို ပင်လယ်လှိုင်းလုံးတွေကို ချောမွေ့စေမယ့်သူရဲ့လက်ကို အပ်လိုက်တာလို့ ဆိုလိုတယ်။ (ဂလာတိ 6,3) အနားယူရန် ခရစ်တော်ထံ ကြွလာခြင်းကို ဆိုလိုသည် (မဿဲ 11,28စာ-၃၀)။ သစ္စာစကားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဟု ဆိုလိုသည်။
နောင်တရခြင်းဟူသည်ဘုရားသခင်ကိုမည်သူဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပြီးသူလုပ်ဆောင်သည်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နောင်တသည်သင်၏ကောင်းသောအကျင့်များနှင့်မကောင်းသောအကျင့်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ သူဖြစ်လိုသောလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဤအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အဝ သိရှိထားကြပါစို့- ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်သည် - အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်၊ သူသည် ၎င်းတို့ကို စာရင်းမပေးထားပါ။ (Johannes 3,17) ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်က ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သခင်ယေရှု အသေခံခဲ့သည် (ရောမ 5,8) သူသည် ယဇ်ပူဇော်သော သိုးသငယ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံတော်မူခဲ့သည်-- ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် (1. ဂျိုဟန် 2,2).
ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုက“ ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်။ ဒုစရိုက်များနှင့်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ကြလော့” ဟုသွန်သင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစွန်းရောက်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောမာနထောင်လွှားမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မုသာရှိသမျှ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရက်စက်ယုတ်မာမှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မာနများ၊ ဆန္ဒများ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ လုပ်ရပ်များနှင့်အစီအစဉ်များ - ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်။ မဖော်ပြနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကိုယ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းပြီးထာဝရကျေးဇူးတင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ဆောင်ပုဒ်အရဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်သည် -“ ငါကလူကောင်းတစ်ယောက်၊ ဘယ်သူကမှသူဟာငါမဟုတ်ဘူးလို့မထင်ဘူး၊ ပြေးတဲ့ဘီးပေါ်မှာပြေးနေတဲ့ဟမ်းစ်တာရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွဲဆောင်ထားတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်နိုင်သည် သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့် သူ့ထံမှ ထွက်ပြေးနိုင်သည်။ ငါတို့က သူ့ကိုယုံရင် ရွှင်လန်းမှုအပြည့်နဲ့ သူနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ လိုက်သွားနိုင်တယ် (သူဟာ အပြစ်သားသူငယ်ချင်း၊ လူဆိုးတွေတောင်မှ ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေအပါအဝင် အပြစ်သားအားလုံး)။ ငါတို့က သူ့ကို မယုံကြည်ရင် ငါတို့ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရင် ငါတို့က သူနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး (ဒါကြောင့် ငါတို့အလိုရှိတဲ့အတိုင်း ပြုမူနေတဲ့လူတွေကလွဲရင် တခြားဘယ်သူနဲ့မှ မနေနိုင်ဘူး)။ အဲဒီအစား၊ ငါတို့က သူ့ကို ကြောက်ရွံ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူ့ကို မထီမဲ့မြင်ပြုမှာ (အပြင် ငါတို့နဲ့ မဝေးတဲ့ တခြားသူတွေပါ)။
ယုံကြည်ခြင်းနှင့်နောင်တတို့အတူတကွလက်တွဲသွားသည်။ သင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားသောအခါတစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်ပျက်သည်။ သင်သည်ဘုရားသခင့်ကရုဏာတော်လိုအပ်နေသောအပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောပေါက်သည်။ သူသည်သင့်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ သင်၏အသက်ကိုလည်းကယ်တင်လိမ့်မည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်နောင်တရတယ်။
တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များ တွင်၊ 2,38, e.g. B. ပေတရုက စုဝေးနေသောလူအုပ်အား “ပေတရုက “သင်တို့၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ သင်တို့တစ်ဦးစီအား နောင်တရ၍ နှစ်ခြင်းခံကြလော့။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် နောင်တသည် အထုပ်တစ်ထုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ “နောင်တရ” ဟုဆိုသောအခါတွင်လည်း “ယုံကြည်မှု” သို့မဟုတ် “ယုံကြည်မှု” ကို ရည်ညွှန်းနေပါသည်။
နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တွင်ပေတရုက "နောင်တရပြီးဘုရားသခင်ကိုပြန်လှည့်ပါ ... " ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ထံသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မိမိကိုယ်ကိုရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင်အခုရှိနေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး
ကိုယ်ကျင့်တရားစုံလင်သောဖြစ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များကိုခရစ်တော်အားခံယူပြီးနှုတ်ကပတ်တော်၊ သတင်းကောင်း၊ သူ၏အသွေးသည်သင်၏ကယ်တင်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့အတွက်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအစားထာဝရအမွေအနှစ်စီးဆင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
သင်သည်ဘုရားသခင်အားခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ယုံကြည်ကိုးစားပါကသင်နောင်တရမိသည်။ ဘုရားသခင်ကိုနောင်တရခြင်းသည်သင်၏စဉ်းစားပုံပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီးသင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အတွေးအခေါ်သစ်သည်ဘဝတစ်သန်းတွင်သင်မလုပ်နိုင်ရာကိုဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နောင်တရခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားမစုံလင်မှုမှကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစုံလင်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။
သင်သေပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ သင်သည် ကိုယ်ကျင့်တရား ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ ဧဖက်၌ ပေါလုပြုသကဲ့သို့ အပြစ်သည် သင့်ကို သတ်စေ၏။ 2,4အမှတ်-၅ ဖြင့် ကြေငြာခဲ့သည်။ သင်၏အပြစ်များထဲတွင် သင်သေသွားသော်လည်း (အသေခံခြင်းသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သင်ပါဝင်ခဲ့သည့်အရာဖြစ်သည်) ခရစ်တော်သည် သင့်အား အသက်ရှင်စေခဲ့သည် (ထိုအရာသည် ခရစ်တော်၏အရာအားလုံးအတွက် ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်)။
သေလွန်သူလုပ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့သူတို့လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။ သူတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုအသက်မရှင်နိုင်ကြပါ။ သို့သော်သေသောသူများ၊ သေသောသူများသာလျှင်သေခြင်းမှထမြောက်ကြသည်။
သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေခြင်းသည်ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်သည်။ သူကအလောင်းတွေကိုမွှေးမွှေးဘူး။ သူတို့ကိုပါတီအဝတ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ပေးရန်နှင့်သူတို့သည်ဖြောင့်မတ်သောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်မလားဆိုသည်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်သူတို့အားမတိုက်တွန်းပါ။ မင်းသေပြီဘာမှမတတ်ဘူး ယေရှုသည်အလောင်းကောင်အသစ်များနှင့်တိုးတက်မှုများကိုအနည်းဆုံးစိတ်ဝင်စားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သခင်ယေရှုပြုတော်မူသောအရာသည်သူတို့ကိုထမြောက်စေသည်။ တနည်းကား, အလောင်းတွေသူပြုစုပျိုးထောင်တစ်ခုတည်းသောမျိုးဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ သူ့ဘဝထဲကို ၀ င်ခွင့်ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကသေခြင်းပဲ။ သေဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုသိပ်မများပါဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ သေပြီဆိုတာငါတို့ပဲ။
ပျောက်သောသိုးသည် သိုးထိန်းက လိုက်ရှာပြီးမတွေ့မချင်း သူ့ကိုယ်သူရှာမတွေ့5,1စာ-၇)။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဒင်္ဂါးပြားကို အမျိုးသမီးက ရှာမတွေ့ခင်အချိန်အထိ သူ့ဘာသာသူ ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး (း၈-၁၀)။ အလိုရှိခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်းတို့ထည့်ဝင်ခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ ပျော်ရွှင်မှုပါတီကြီး ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ လုံးလုံးမျှော်လင့်ချက်မဲ့ ဆုံးရှုံးမှုသည် ၎င်းတို့အား ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေသည့် တစ်ခုတည်းသော အရာဖြစ်သည်။
နောက်ပုံဥပမာ (း၁၁-၂၄) တွင် ပျောက်သောသားသည်ပင်လျှင် ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ရွေးနှုတ်ခြင်း နှင့် အပြည့်အဝလက်ခံခြင်း ခံရပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည် ၊ အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ မိမိအကြံအစည်ကို အခြေခံ၍မဟုတ်ဘဲ၊ ဥပမာ- "ကျွန်ုပ်သည် သူ့ကျေးဇူးအတွက် တစ်ဖန်လုပ်ဆောင်ပါမည်"။ ဖခင်ဖြစ်သူသည် သူ၏ “အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်” ဟူသော မိန့်ခွန်း၏ ပထမဆုံး စကားလုံးကို မကြားဖူးမီ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည် (း၂၀)။
နောက်ဆုံး၌သားဖြစ်သူသည်နောက်ဆုံး၌သူ၏သေခြင်းတရားကိုလက်ခံပြီးပျောက်ဆုံးသွားသောအခါသူသည်တကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူငြင်းပယ်။ အရှက်တကွဲငြင်းဆန်ခဲ့သောဖခင်သည်ဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ သူ့ကိုအသည်းအသန်နှင့်ခြွင်းချက်မရှိချစ်ရန်။
သူ့ဖခင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ ရွေးနုတ်ခြင်းအတွက် သူ့အစီစဉ်လေးကို ရိုးရှင်းစွာ လျစ်လျူရှုခဲ့သည် (း၁၉-၂၄)။ အစမ်းကာလကို မစောင့်ဘဲ သူ့သားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးအပြည့်နဲ့ ပြန်ပေးခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မဲ့သေခြင်းအခြေအနေသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်စေမည့် တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ အစပြုမှု၊ အလုပ်နှင့် လည်ပတ်မှုတစ်ခုလုံး၏ အောင်မြင်မှုသည် သိုးထိန်း၊ အမျိုးသမီး၊ ခမည်းတော်-ဘုရားသခင်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေါင်းထည့်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာသေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်ရေးရောကာယရောပါသက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေနေသောအချက်ကိုလက်မခံနိုင်လျှင်ခရစ်တော်၌ရှိသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံနိုင်ပါ။ နောင်တရခြင်းဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး သေပြီဟူသောအချက်ကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်ထံရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
နောင်တရခြင်းဟူသည်ကောင်းသော၊ မြင့်မြတ်သောအကျင့်များပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါတို့သေပြီ။ ဒါကငါတို့အသက်ပြန်ရှင်လာအောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ခရစ်တော်၌သူသည်အပြစ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ရွေးနုတ်ခြင်း၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်ယှဉ်သောtheဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ရန်ကိစ္စဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလုသည် ကောလောသဲမြို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း သင်ဆန္ဒရှိမည်ဆိုပါက ဤနက်နဲသောအရာကို ပေါလုဖော်ပြပါသည်။ 3,3"အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် အသေခံ၍၊ သင်၏အသက်ကို ဘုရားသခင်၌ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။"
လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ဝိရောဓိပဲ။ သို့တိုင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အသက်ရှင်နေကြသည်။ သို့သော်ဘုန်းကျက်သရေရှိသောအသက်တာမရှိသေးပါ။ အခန်းငယ် ၄ ၌ဤသို့ဆိုထားသည် - ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူဝှက်ထားလျက်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ်ထွန်းလာသည်နှင့်အမျှထင်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်။ အခန်းငယ် ၄ တွင်ဤသို့ဆိုထားသည် - သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုန်းထင်ရှားလိမ့်မည်။
ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ဖြစ်သည်။ သူပေါ်လာတဲ့အခါသူနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ထိုနည်းတူ၊ အသေကောင်များသည်ကိုယ်အတွက်ဘာမျှမတတ်နိုင်ပါ။ မင်းပြောင်းလဲလို့မရဘူး ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူး သင်တိုးတက်လို့မရပါဘူး သူတို့လုပ်နိုင်တာကသေပြီ။
သို့ရာတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုယ်သူ အသက်၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည့်အတွက်၊ သေလွန်သောသူတို့ကို ထမြောက်စေခြင်းငှာ ကြီးစွာသော ရွှင်လန်းမှုရှိပြီး ခရစ်တော်၌လည်း ထိုသို့ပြုတော်မူသည် (ရောမ၊ 6,4) အလောင်းများသည် ၎င်းတို့၏သေဆုံးမှုအခြေအနေမှလွဲ၍ ဤဖြစ်စဉ်အတွက် လုံးဝမပါဝင်ပါ။
ဘုရားသခင်ကအရာရာတိုင်းကိုလုပ်တယ်။ ၎င်းသည်သူ၏အလုပ်နှင့်သူ၏တစ်ခုတည်းသောအစမှအဆုံးအထိဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်သောအလောင်း ၂ မျိုးရှိသည် - ကယ်တင်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခံယူရသူများနှင့်သူတို့၏ပုံမှန်အတိုင်းသေခြင်းတရားကိုသက်ရှိထင်ရှားသူများ၊ သူတို့၏မျက်စိကိုပိတ်ကာသူတို့၏နားကိုဖုံးထားသူများ၊ လိုချင်တယ်
တနည်းကား၊ နောင်တရခြင်းကကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၌ရှိသည်ဟုဘုရားသခင်ပြောသောခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းဆုကျေးဇူးကို "ဟုတ်တယ်" ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်တယူခြင်း၊ ကတိပေးခြင်း၊ အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ အဲဒါဟုတ်ပါတယ်။ နောင်တရခြင်းဟူသည်“ ငါစိတ်မကောင်း” သို့မဟုတ်“ နောက်တဖန်မလုပ်ရဟုငါကတိပြုသည်” ကိုပြန်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ရက်စက်စွာရိုးရိုးသားသားဖြစ်ချင်တယ်။ သင်ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းရှိသည် - အကယ်၍ တကယ့်လုပ်ရပ်အဖြစ်မဟုတ်လျှင်အနည်းဆုံးအတွေး၊ အလိုဆန္ဒနှင့်ခံစားမှုတို့တွင်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်တောင်းပန်ပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်၊ သင်အမှန်တကယ်ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်မလိုချင်ပါ၊ သို့သော်နောင်တရခြင်း၏ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ပါ။
သင်သေပြီ၊ သေသောသူသည် လူသေကဲ့သို့ ပြုမူသည်ကို သတိရလော့။ အပြစ်၌သေလျှင်မူကား၊ ခရစ်တော်၌ အသက်ရှင်လျက်ရှိသည် (ရောမ 6,11) သို့သော် ခရစ်တော်၌ သင်၏အသက်တာသည် ဘုရားသခင်၌ သူနှင့်အတူ ဖုံးကွယ်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် အချိန်တိုင်းတွင် မပေါ်သေးပါ၊ သို့မဟုတ် မကြာခဏ ပေါ်မလာသေးပါ။ ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင် ပေါ်ထွန်းလာချိန်အထိ မည်ကဲ့သို့ အမှန်တကယ် ဖြစ်သည်ကိုမူ မဖော်ပြပေ။
ဤအချိန်အတောအတွင်းသင်သည်ခရစ်တော်၌ရှင်သန်နေပြီဆိုလျှင်ယခုအချိန်အထိအပြစ်၌သေနေဆဲဖြစ်ပြီးသင်၏သေခြင်းအခြေအနေသည်အစဉ်အမြဲကဲ့သို့ကောင်းသည်။ ခရစ်တော်၏ထမြောက်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၌သူနှင့်အတူရှင်သန်ခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ဤသေလွန်သူ၊ သေလွန်သူကဲ့သို့ပြုမူခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မလွယ်ကူပါ။
ဤတွင်ယုံကြည်ချက်ရောက်ရှိလာသည်။ နောင်တရ။ theဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ပါ။ နှစ်ခုရှုထောင့်အတူတူပိုင်။ သင့်မှာအခြားတစ်ခုမပါဘဲတစ်ခုမရှိနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဆေးကြောတော်မူကြောင်း၊ သင်၏သေခြင်းကိုသင်၏ရောဂါပျောက်ကင်းစေပြီးသားတော်၌အစဉ်အမြဲရှင်သန်စေသည်ဟုယုံကြည်ရန်သတင်းကောင်းသည်နောင်တရရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်သူသည်လုံးဝအကူအညီမဲ့၊ အဆုံးစွန်၌၎င်း၊ သေခြင်း၌၎င်း၊ ဘုရားသခင်ထံလွတ်လပ်စွာရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် have ၀ ံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကတူညီတဲ့အကြွေစေ့၏နှစ်ဖက်ကိုကိုယ်စားပြု; ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးပြုခြင်းထက်အခြားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်မျှမပါဘဲသင့်အားဘုရားသခင်ပေးသောအကြွေစေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ကအပြုအမူ, မအတိုင်းအတာ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘုရားသခင်အားနောင်တရခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်။ အမူအကျင့်ကောင်းများနှင့်ပြသလိမ့်မည်ဟုယခုလူအချို့ပြောကြလိမ့်မည်။ ငါငြင်းခုံချင်ကြဘူး။ ၎င်းအစားပြtheနာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောအပြုအမူများမရှိခြင်း (သို့) တည်ရှိမှုအားဖြင့်နောင်တတရားကိုတိုင်းတာလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်နောင်တတရား၏ဝမ်းနည်းဖွယ်နားလည်မှုလွဲနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ နောင်တရလျှင်စိတ်ရင်းမှန်လျှင်၊ သင်တို့သည်နောက်တဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုလိုကြ” ဟူသောအဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားပစ်လိုကြသည်။ အတိအကျ၎င်းသည်နောင်တယူခြင်း၏အဓိကအချက်မဟုတ်ပါ။
နောင်တရခြင်း၏အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအရာမှာမိမိကိုယ်ကိုဝေးကွာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုစွန့်ခွာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ပိုင်လော်ဘီသမား၊ ကိုယ်ပိုင်စာနယ်ဇင်းကိုယ်စားလှယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်နှင့်ကာကွယ်ရေးရှေ့နေဖြစ်လိုသောပြောင်းလဲခြင်းနှလုံးသားသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုသေရန်နှင့်သူသည်လုံးဝခွင့်လွှတ်ပြီးရွေးနုတ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ချစ်မြတ်နိုးရသောသားသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ရန်မိမိထောင့်တွင်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်။
နောင်တဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ သဘာဝအတိုင်း မကြိုက်သောအရာနှစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ ပထမ၊ ဆိုလိုသည်မှာ သီချင်းလိုင်း၊ "Baby၊ မင်းမကောင်းပါဘူး" ဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား စုံလင်စွာဖော်ပြသည်ဟူသောအချက်ကို ရင်ဆိုင်ရခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများထက်သာလွန်ခြင်းမရှိကြောင်းကို ရင်ဆိုင်ရခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မထိုက်တန်သော ကရုဏာအတွက် အခြားအရှုံးသမားအားလုံးနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရပ်တည်နေပါသည်။
တနည်းအားဖြင့်နောင်တရခြင်းသည်စိတ်နှိမ့်ချခြင်းမှဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှိမ့်ချသောစိတ်သည်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအပေါ်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားသည်။ သူသည်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ပြီးသူ၏စိတ်ဓာတ်ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သည်၊ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုသေပြီးဘုရားသခင့်အိမ်ရှေ့တွင်တောင်းထဲ၌မိမိကိုယ်ကိုထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
နောင်တယူခြင်းကဘယ်တော့မှအပြစ်ထပ်မပြုတော့ဟူသောကတိဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်ကိုစွန့်လွှတ်ရမည်။ ပထမ ဦး စွာဤသို့သောကတိတော်သည်လေပူ မှလွဲ၍ ဘာမျှမဟုတ်ပါ။ ဒုတိယအနေနှင့်၊
ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုအတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင်၊ ယေရှုခရစ်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်။ နောင်တရခြင်းသည်သင်၏“ ဟုတ်ကဲ့” ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏“ ဟုတ်ကဲ့” ဖြစ်သည်။ သင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၊ ခရစ်တော်၌သင်၏အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြောင့်မတ်စွာကြွေးကြော်ခြင်းကိုဘုရားသခင်လက်ခံသည်။
သူ၏လက်ဆောင်ကိုလက်ခံခြင်းသည်သင်၏သေခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်အတွက်သင်လိုအပ်ကြောင်းကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုယုံကြည်ကိုးစားရန်၊ သူ့ကိုယုံကြည်ရန်နှင့်သင်၏တစ်ခုလုံးကို၊ သင်၏ဖြစ်တည်မှု၊ သင်၏ဖြစ်တည်မှုနှင့်သင်အားအရာအားလုံးအားလုံးကိုသူ့လက်ထဲအပ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်သူ၌အနားယူခြင်းနှင့်သင်၏ဝန်ကိုသူ့ထံအပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင်ငါတို့သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်၏ကြွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်၌ပျော်မွေ့။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါလေ။ ပျောက်သောသူကိုရွေးနှုတ်တော်မူ၏။ အပြစ်ရှိသောသူကိုကယ်တင်တော်မူ၏။ သူသည်သေလွန်သူများကိုထမြောက်စေသည်
သူကငါတို့ဘက်မှာရှိတယ်။ သူတည်ရှိလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ငါတို့စပ်ကြားမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ မင်းရဲ့ငြီးငွေ့ဖွယ်အပြစ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်နီးချင်းရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကိုယုံပါ။ ဒါကငါတို့အားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းပါ။ သူဟာစကားလုံးဖြစ်ပြီးသူဘာပြောနေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်။